Unqaba ukukhokha imali yokulungiswa komonakalo odalwe umasingcwabisane owaseSobantu | Eyethu News
Unqaba ukukhokha imali yokulungiswa komonakalo odalwe umasingcwabisane owaseSobantu
“Kwenzeke iphutha bakhipha itshe okungelona”
Esithombeni uMnu Mxolisi Mvuyane onqaba ukukhokhela umonakalo odalwe ngumasingcwabisane
OWESILISA waseSobantu ushaya phansi ngonyawo uthi angeke ayikhokhe lemali esekuthiwe akayikhokhe ukuze kulungiswe ithuna likankosikazi wakhe elakhishwa itshe lasala liwumgodi eMountain Rise. UMnu Mxolisi Mvuyane (64) utshele leliphephandaba ukuthi umphathi wabangcwabi iKagiso Funeral Services uMnu Sipho Mthethwa wamutshela ukuthi kwenzeke iphutha bakhipha itshe okungelona kuzomele akhokhe imali engu – R3000 ukuze alungiselwe.
“Ngangiye emathuneni emasontweni adlule ngabizwa ngowathi ungumphathi wakulawamathuna wangibuza ukuthi ngubani owangifakela itshe ngamazisa wase engitshela ukuthi kulabangcwabi engibajoyinile bayawakhipha uma abantu bengasiqedile isikweletu. Ngabe senginikela khona eKagiso ngenhlanhla ngamufica umphathi wakhona nokuyilapho angitshela khona lensambatheka yokuthi kumele ngikhokhe ukuze ngilungiselwe ithuna. Lokho yinto engeke ngiyenze ngoba akulona iphutha lami naye ngamtshela lokho,” kusho uMnu Mvuyane.
Uthe abasemathuneni aseMountain Rise sebeyifakile inhlabathi ethuneni kanti usevule necala emaphoyiseni.
Umphathi walenkampani kamasingcwabisane iKagiso Funeral Services uMnu Sipho Mthethwa uthe imuphatha kabi lento yokwebiwa kwamatshe amathuna. “ Indaba yokuthi ithina esiwakhiphayo amatshe ingamahebezi ayikho nakumgomo wethu ukuthi silisuse uma umuntu esakweleta. Inkampani yethu isibhekene nenkulu inkinga kulamathuna aseMountain Rise kwebiwa amatshe akulona elakaMvuyane kuphela elebiwe. Makwenzeke nje uke aqhamuke nesu lokuthi kuhlangatshezwane ngemali. Itshe leli elebiwe libiza u-R12 000 uMvuyane ukhokha uR200 ngenyanga okusho ukuthi ayikahlangani lemali yetshe nomasingcwabisane,” kusho uMnu Mthethwa.
Funda olunye udaba : Udidekile umndeni obhidlizelwe ithuna
Okhulumela amaphoyisa aseMountain Rise uJoshua Maistry ukuqinisekisile ukuvulwa kwecala lokuntshontsha. “Kunophenyo oluqhubekayo ngoba ummangali uzokwazi ukubona impahla mayitholakala. Akekho umsolwa osaboshiwe okwamanje,” kusho yena.
Bagwetshwe iminyaka ewu-11 ngokubamba inkunzi umfundi eScottsville